R/Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo Wareysi gaar ah siiyay Hiiraan Online | R/Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo Wareysi gaar ah siiyay Hiiraan Online | Hal Sheegaha La Hubo
R/Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo Wareysi gaar ah siiyay Hiiraan Online
Ra’iisal wasaariihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke oo ku sugan magaalada Dubai, ayaa wareysi gaar ah oo uu siiyay Hiiraan Onlinem waxaa uu uga waramay xiisada siyaasadeed ee ka oogan Golaha Shacabka iyo arinta Shirkadda DP World ee dekedda Berbera.
Cumar Cabdirashiid ayaa isaga oo ka hadlay aragtidiisa khilaafka Baarlamaanka waxaa uu sheegay in uu ku talinayo arintaan in lagu dhameeyo wada hadal, haddii laga fursan waayana loo maro dariiqa sharciga iyo xeer hoosaadka baarlamaanka.
‘’Runtii Arintaasi waa arin u baahan in si dhaqse ah loo xaliyo, waayo haddii ay soo jiitanto waxaa ay cuuryaamin kartaa howlihii golayaasha dowladda, haddi ay taa suurtal noqon weysanaya waxaa tahay in cod loo qaado sida uu xeer hoosaadka iyo dastuurku qabo’’ ayuu yiri Cumar C/rashiid.
Waxaa uu soo dhaweeyay go’aanka Aqalka sare ay ka qaateen arintan iyo talooyinka ay soo jeediyeen oo sida uu hadalka u dhigay u baahan in sida ay u dhigeen loo qaato.
Mar wax laga weydiiyay aragtidiisa ku saabsan heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee shirkadda DP World, Itoobiya iyo Somaliland, ayuu yiri’’ Waxaan rabaa in aan kuu cadeeyo xukuumadii hore ee aan hogaaminayay iyo dowladdii aan ka tirsanaa intaba ma jirto wax heshiis ah oo ku saabsan arrimaha dekeddaha oo aan la galnay shirkadda DP World, saxiixa heshiisyadan labada dekeddood ee Boosaaso iyo Berbera –na waxaa uu dhacay wixii ka danbeeyay bishii March sanadkii 2017da, arrimaha hadda socdana dowladda hadda jirta ayeey mas’uuliyadooda saaran tahay, wixii go’aan ah oo ay ka qaataan ayaa dalka go’aan u ah, waayo iyaga ayaa hadda tallada haya, ‘’ ayuu yiri Cumar C/rashiid.
Waxaa uu meesha ka saaray waxba kama jiraanna ku tilmaamay in isaga uu wax ogaa heshiiskaa ama uu xitaa ku lug lahaa sida uu hadalka u dhigay.
‘’Xukuumaddii aan anniga hogaaminayay wax go’aan ah ama tallo ah oo aan ku laheyn heshiisyadan dekeddaha ku saabsan waxaan kuu xaqiijinayaa haba yaraatee ma jirin’’ ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
Mar ay Hiiraan Online weydiisay xubinnimadiisa Aqalka sare iyo in uu muddo dheerka ka maqan yahay fadhiyada golaha ayuu sheegay in qorshihiisu dhawaan in uu dalka dib ugu laabto ka qeybgalo fadhiyada golaha Aqalka Sare madaama ayuu yiri xiligan ay dalka ka jiraan arrimo xasaasi ah iyo xiisado siyaasadeed.
‘’Waayo golaha Aqalka sare howlo badan ayaa hor yeela, sidaa markii howlahaa oo dhan loo dhameystiri lahaa in aan qeyb ka noqdo ayeey tahay, iyo dhameystirka sharciyada la xiriira federaaleynta iyo qeybsiga awoodaha dowlad gobolleedyada iyo dowladda dhexe, marka waxaa rajeynayaa in aan sida ugu dhaqsiyaha badan uga qeybgalo fadhiyada golaha ayuu yeelanayo’’ ayuu yiri Cumar C/rashiid.
Waxaa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay warar sheegaya in Cumarr C/rashiid ku sugan yahay magaalada Muqdisho oo sida uu hadalka u dhigay warbaahinta Soomaalida qaarkood lagu daabacay, isaga oo intaa ku daray in uu ka xun yahay bulshada in lagu jahwareeriyo wararka noocaas.
‘’Waxaan rabaa Hiiraan Online in aan idin cadeeyo in aysan waxba ka jirin warar sheegaya Cumar C/rashiid ayaa Muqdisho ku sugan, waxaana loo baahan yahay in umadda Soomaaliyeeed looga digo sheekooyinkaan aan jirin ee maalin walba la sameynayo oo la doonayo in bulshada lagu jahwareeriyo,’’ ayuu hadalkiis sii raaciyay Cumar C/rashiid.
Dhinaca kale mar wax laga weydiiyay in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho Qof iyo Cod ah ayuu yiri’’ Doorashada noocaas ah labo arrimood oo kaliya ayeey ku dhacdaa, waxaa ugu horeeya marka hore si kuraasta deegaan loogu saleeyo in loo baahan in la ogaado xudduudaha dowlad gobolleedyada, kaddibna loo gudbo tirinta dadka taasoo laga ogaan karo hadba deegaanka inta kuraas ah ee uu yeelanayo, taasna waa adag tahay oo howshaas kaliya ayaa laga yabaa in ay qaadato muddo ku dhaw saddex sano.
Laakiin dhinaca kale waxaa uu sheegay in dariiqa ugu sahlan uu noqon karo in nidaamka xisbiyada la raaco, islamarkaana la diiwaan galiyo cid kasta oo Soomaali ah oo codeyn karta, iyada oo loo sameynayo ID lagu aqoonsan karo.
Ugu danbeyntii waxaa uu sheegay in haddii labada dariiq midkoodna uu suurtagal noqon waayo in loo baahan yahay wada tashi in la galiyo arinta oo hay’addaha dastuuriga ah oo dhan ay ka wada qeybqaataan wada tashigaa si looga arinsado halka kale ee looga dhaqaaqayo si dowladnimadii u sii jirto.